Fitsipika momba ny tsiambaratelo nohazavaina amin'ny Expert Expert sy ny fomba hanakanana izany
Raha mpandrindra tranonkala matihanina na orinasa rindrambaiko ianao dia mieritreritra momba ny antontan'isa momba ny statistika / analytics, fantatrao angamba momba ny Google Analytics, Open Web Analytics, Piwik Analytics ary tranonkala fanangonana sy fanadihadiana. Raha mahatsikaritra ianao fa ny fifamoivoizana hafahafa sy ny mpitsidika hafa dia mitsambikina amin'ny tranonkala referrer toy ny buttons-for-websites.com, darodar - win win casino codes.com, ary tsara indrindra- seo -solution.com, tokony hifantoka amin'ny fanatsarana ny ny kalitaon'ny fifamoivoizanao.
Nanazava ireo olana saro-pady momba izany i Artem Abgarian, mpitantana ny fahombiazan'ny Customer Success of Semalt .
Nanazava ny Spam Referrer
Best-seo-solution.com, 100dollars-seo.com, ary darodar.com dia tranonkala adiresy referans. Izy rehetra dia manambara ny vokatra sy ny serivisiny amin'ny aterineto, ary ny zavatra tena mahasosotra indrindra dia ny manolotra ny tolotr'izy ireo amin'ny vidiny mora. Na izany aza, tsy azo itokisana ny asany, ary tadiavina ny tranonkala handefasana anao fifamoivozana sandoka amin'ny taham-pidirana 100%. Araka ny hitanao, izy rehetra dia laharana eo amin'ny pejy voalohany amin'ny motera fikarohana . Izany dia noho ireo tranonkala mamitaka ny kaonty Google Analytics anao.
1. 100% Tandindonin-doza - matetika izy ireo no mitsidika ny pejinao ary miala tsy ho ela. Izany no mahatonga ny taham-pidinan'ny tranokala ho 100% satria tsy liana amin'ny votoatiny, ny sarin'ny tranokala, ary ny serivisy ny mpitsidika..
2. Ny fampiasana tafahoatra ny onjam-piainana - ireo tranonkala dia mampiasa maromaro maromaro hampiasaina amin'ny Google Analytics sy ny mpanjifany. Izy ireo dia tafiditra amin'ny fihetsiketsehana mihoam-pampana ary manararaotra ireo mpanjifany amin'ny fanimbana ny tranokalany amin'ny fifamoivoizana.
Diniho ny loharanom-pandrefesana avy amin'ny URL fanamarinana Spam
Mety tsy ho vitantsika samirery ny handinika ny loharanom-pifamoivoizana sy ny adiresy URL momba ny spam. Ny fomba tsara indrindra anefa dia ny mamorona Filaharana vitsivitsy vitsivitsy ao amin'ny fizarana Add Segment. Tsy misy fitsipika sy fitsipika henjana izay tokony arahanao raha adiresy IP amin'ny mpitsoa-ponenana miseho anarana no miova isan'andro. Tahaka ny nametrahan'ireo spammers vola sy fotoana betsaka ho an'ity raharaham-barotra ity mba hampidirana tranokala maro araka izay tratra.
Mitahiry Spam miaraka amin'ny Apache. Fitsipika ankapobeny
Raha eo amin'ny server Apache ianao, dia azonao atao ny manaraka ny fitsipiky ny htaccesss mba hampitsaharana ny spam tsy hampiseho anao ao anaty rakitrao. Amin'izay fotoana izay, aza adinoina fa manova ny rohy mifandray aminy izy roa na telo volana. Ny fitsipika dia havaozina tsindraindray, noho izany dia tokony hanaraka ny fanavaozana ianao mba hahafantarana ny fitsipika haccess ankehitriny.
Tsy toy ny darodar.com, video-for-your-business.com dia manolotra tolotra vokatra video ho an'ireo mpanjifany maneran-tany. Misy ny fahafahana manompo fa ara-drariny izany, saingy noho ny tantaran'izy ireo mahatsikaiky, tsy tokony hampidi-doza ny tranokalanao amin'ny fomba rehetra.
Mamorona Spam Filters
Raha tsy te hampiasa ny fitsipiky ny htaccess ianao noho ny mari-pamantarana mampihetsi-po anao, dia afaka manamboatra filaharam-pifamoivoizana hita maso ianao. Ireo sivana ireo dia hanampy anao hanivana ny spam referendum amin'ny fomba tsara kokoa. Tokony handeha any amin'ny sehatra View ianao ary jereo ny safidy Filter. Eto dia tsy maintsy mampiditra fehezanteny manokana ianao ary tsy mihoatra ny halavany mihoatra ny 255.
Asehoy ny Hits avy amin'ny Spiders and Bots
Ny iray amin'ireo fitaovana mahagaga indrindra hanampy antsika hiady amin'ny spam referrer dia ao anatin'ny kaonty Google Analytics. Tokony hivezivezy ny safidy Bot Filtering, izay hanampy anao hisintaka ireo hitsikerana ireo spiders sy bots fantatra avy amin'ny sehatra View.